12 febroary — Ny Félix resahana amin'ity andro anio ity dia ilay papa nodimandry tamin'ny taona 530. Tamin'ny mey 526 mantsy no maty tany an-tranomaizina ny papa Jean Voalohany izay voafonja noho ny fanenjehana nataon'ny mpanjaka Théodoric.
Raha ny marina dia fifidianana no natao mba hijerena izay hisolo ny papa teo aloha. Tsy natao anefa ny fifidianana fa i Théodoric mpanjaka no nifidy avy hatrany an'i Félix de Samnium. Ny 12 jolay 526 izy no nandray io fiketrahana io ary nitondra ny anarana Félix IV. Nahagaga anefa fa maty ny 30 aogositra ilay mpanjaka ary namela kamboty mbola tsy ampy taona ka ny renin'ity zaza ity no nitantana ny fanjakana. Nifankahazo tsara tamin'ny mpino katôlika izy io ka nanome trano lehibe roa ho an'ny Fiangonana. Ny iray ilay lasa Bazilikan'i Masindahy Côme sy Damien.
Rehefa nitantana ny Fiangonana nandritra ny 4 taona sy 2 volana ny papa Félix IV dia narary ka 22 septambra 530 izy no natsoin'ny Ray hody any aminy. Izy no papa faha-54.